Online Nepali News, Himali News, Himali sandesh, Live News, Video, Online News » राजनीति
फोरमले गर्‍यो सरकारमा जाने निर्णय
२२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १४:०१
काठमाडौं : स‌घीय समाजवादी फोरम नेपालले वामगठबन्धनको सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको फोरमको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो । फोरम र वामगठबन्धनबीच आजै सहमतिमा हस्ताक्षर हुने तयारी भएको छ । फोरमले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षमा १० र समानुपातिकमा ६ सिट जितेको छ । मन्त्रीको सख्यापछि.....
प्रतिनिधि सभामा हितबहादुर तामाङले पहिलोपटक तामाङ भाषामा सपथ लिने
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १७:३१
प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी तामाङ समुदायबाट ६ जना सांसद चुनिएका छन् । जसमा हितबहादुर तामाङ, शेरबहादुर तामाङ, गंगाबहादुर तामाङ, बहादुरसिंह तामाङ, शान्ति पाख्रिन र नबिना लामा हुन् । अाइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित प्रतिनिधिसभा हलमा प्रतिनिधिसभाका र नुप्सेहलमा राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ हुनेछ । पद तथा गोपनियताको.....
१७ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १२:५३
काठमाडौं : झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा.....
के प्रदेश १ को नाम ‘सगरमाथा’ होला ?
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०७:५७
विराटनगर — प्रदेश १ को नाम के होला ? अहिले धेरैको बनेको छ । यही चासो विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त भइरहेका छन् । कतिपयले सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसदहरूलाई सुझाव दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि धेरैले प्रदेशको नाम सुझाइरहेका छन् । प्रादेशिक पहिचान, समुदायको पहिचान र समृद्धि झल्कने नाम राख्नुपर्ने.....